१७०० बिन्दु माथि पुगेको बजारलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा - नेपालबहस
१७०० बिन्दु माथि पुगेको बजारलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा
| १६:५०:३० मा प्रकाशित
२७ कार्तिक, काठमाडाैं । तिहार अघिको अन्तिम कारोवार दिन नेप्से परिसूचकले लगानीकर्तालाई खुशी बनाउँदै बन्द भएको छ। नेप्से परिसूचक १० दशमलव ८२ अंकले वृद्धि हुँदै १७१८ दशमलव ४९ को विन्दुमा बन्द भएको हाे ।
अघिल्लो कारोवार दिन शेयरबजारले निकै वर्ष पछि १७०० को विन्दु माथि बन्द हुन सफल भएकोमा आज पनि बजारको न्यून विन्दू १७०० माथि नै थियो । यसरी हेर्दा अहिलेको बजारमा १७०० को विन्दु एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक टेवाको रुपमा अघि सरेको छ।
विगत ५ कारोवार दिनदेखि नेप्से परिसूचकमा वृद्धि देखिएको छ । ५ कारोवार दिनसम्म लगातार बजार वृद्धि हुनुमा ठूला पुँजीकरण भएका कम्पनी जस्तै नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष, नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको बजार मूल्य केही आकर्षक वृद्धि भएको थियो ।
जसको फलस्वरूप नेप्से परिसूचकमा वृद्धि देखिन प्रमुख कारण बनेको थियो । बजार पुँजीकरणको आधारमा नेप्से परिसूचक गणना हुने भएकोले ठूलो बजार पुँजीकरण भएका कम्पनीहरुको नेप्से परिसूचकमा ठूलो असर पर्ने गर्छ।
लगातार ५ कारोवार दिनदेखि वृद्धि भएकोले तिहार पश्चात खुलेको बजारमा सामान्य करेक्सन आउने सम्भावना पनि छ। बुल मार्केटमा कारोवारीहरुले नाफा बुक गर्दा करेक्सन आउने गर्दछ ।
शेयरबजारलाई निकै धेरै नै ड्राईभ गर्न सक्ने वाणिज्य बैंक उपसुचकमा त्यस्तो ठुलो वृद्धि आउँन अझै सकेको छैन् । यस उपसुचकमा शेयर आपुर्ति धेरै भएकोले बजार मूल्य थोरै वृद्धि हुँदा शेयर सप्लाई आउने ट्रेण्ड रहेको छ । कम बजार मूल्य र आकर्षक लाभांश दिने क्षेत्रको रुपमा परिचय बनाएको वाणिज्य बैंकका शेयरहरु निकै थोरै मूल्य आम्दानी अनुपातमा कारोवार भए पनि मूल्य त्यस्तो धेरै वृद्धि हुन सकेको छैन्।
अहिलेको वर्तमान बजारलाई विस्लेषण गर्दा केही ठूला पुँजीकरण भएका कम्पनीहरुको मूल्य वृद्धिले मात्र बुलिश बजारलाई दिगो राख्न सक्दैन । बजारले ठूलो बुलिस यात्रा तय हुन वाणिज्य बैंक सँगै अन्य उपसुचकमा पनि बुलिस यात्रा तय हुनु पर्छ।
आज १९८ कम्पनीको शेयर कारोवार हुँदा ४ अर्ब ८२ करोडको शेयर कारोवार भएको छ । नेप्से परिसूचक शुन्य दशमलव ६३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बजार १७१३ दशमलव ७१ को विन्दुमा खुलेकोमा बजारले १७२२ दशमलव ३२को उच्च विन्दु सम्म पुगेको थियो । बजारले १७०२ दशमलव ७० को न्यून विन्दु समातेको थियो ।
वाणिज्य बैंकमा करेक्सन आउँदा, कुन सेक्टरमा देखियो अन्तिम समयमा चहलपहल ? २२ घण्टा पहिले
महासंघको चुनाव पछि शेयरबजार झन् बढ्यो २ दिन पहिले
“अलटाइम हाई” विन्दुमा नेपाली दोश्रो बजार तर सानो करेस्कन आउने सम्भावना कति ? ५ दिन पहिले
लगानीकर्ताको लागि खुशीको दिन, नेप्से १८०० माथि बन्द हुँदा आजको ग्राफले के देखायो ? ७ दिन पहिले
शेयरबजार : हरेक दिन नयाँ रेकर्ड, दुई दिनकै १२ अर्बकाे कारोवार १ हप्ता पहिले
बालुवाटारमा नेकपाको सचिवालय बैठक शुरु ४ मिनेट पहिले
नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक अन्यौलमा, सदस्यहरुलाई छैन् जानकारी ! ७ मिनेट पहिले
जनताका नेता भन्नेलाई सुरक्षा थ्रेट ? २१ मिनेट पहिले
सचिवालय बैठकमा ओलिविरुद्ध पूरक प्रस्ताव पेश गर्दै प्रचण्ड ३९ मिनेट पहिले
अतिविपन्न तथा दलित घरपरिवारलाई खाद्यान्न सहयोग ४० मिनेट पहिले
ऐन उल्लङ्घन गर्नेमा पानी उद्योग पहिलो नम्बरमा ४१ मिनेट पहिले
सडक र मोटरेबल पुल आयोजना अलपत्र, नागरिकलाई सास्ती ५० मिनेट पहिले
मङ्गलाले हाडेभिरमा १५ श्ययाको अस्पताल बनाउन शिलान्यास ५४ मिनेट पहिले
थप ३ जना कोरोना संक्रमितको ज्यान गयो ५४ मिनेट पहिले
मालपोत कार्यालय : कर्मचारीको अभाव, अर्कोतिर सेवाग्राहीको चाप १ घण्टा पहिले
सचिवालय बैठकको ठाउँ फेरियो, ओलीको फेरि राजीनामा माग्ने प्रचण्डको योजना २ घण्टा पहिले
स्कुटर पल्टि‌ँ‌दा चालकको मृत्यु ६ घण्टा पहिले
भारत र अमेरिकामा नेपाली चियाको लोगो दर्ता ६ घण्टा पहिले
आज बिहानैदेखि कमला नदीमा भूतमेला भर्न श्रद्धालुको घुइँचो २४ घण्टा पहिले
नेपालकै अग्लो दृश्यावलोकन स्तम्भ तोकिएको समयमै बन्ने प्रतिबद्धता १९ घण्टा पहिले
रुद्रायणीको पुनःनिर्माण गरिनेः खोकनालाई असर नपर्ने गरी द्रुतमार्ग बन्ने २० घण्टा पहिले
नेकपा विवाद : राष्ट्रपतिको मर्यादा र चिनियाँ राजदूतको सक्रियता ५ दिन पहिले
घुस लिएका अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर ४ दिन पहिले
राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतलनिवासमा चिनियाँ रक्षामन्त्री २ दिन पहिले
चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले साधारण शेयर बिक्री गर्ने ६ दिन पहिले
भारतसँगको नाका खोल्न जनता समाजवादी पार्टीको माग ७ दिन पहिले
पर्यटन पुनःउत्थानमा निजी क्षेत्रको एकता र सहकार्य जरुरी ५ दिन पहिले
जेलमा काेराेना फैलिएपछि दङ्गा हुँदा ६ जनाको मृत्यु २४ घण्टा पहिले
हराएको अठार तोला गहना र नगद बुझाइयो सम्बन्धित धनीलाई २४ घण्टा पहिले
आज ३३ औँ विश्व एड्स दिवस मनाइँदै, मृत्युदर ८५ प्रतिशत घट्याे ५ घण्टा पहिले
मानुङकोटमा फोहर सङ्कलन गरिँदै १ हप्ता पहिले
प्रधानमन्त्री ओलीको मति भष्ट भइसक्यो : जसपा मन्त्री सोनल ३ हप्ता पहिले
फरक अभिभावक बनाएर कीर्ते नागरिकता दिएको आरोपमा दुई पक्राउ ४ दिन पहिले
प्रजातन्त्र सेनानी श्रेष्ठको निधनप्रति कांग्रेसद्धारा दुःख व्यक्त ३ हप्ता पहिले
एसइई परीक्षा : पाँच निरीक्षक र छ परीक्षार्थी पक्राउ २ वर्ष पहिले
कोरोनाको हटस्पट काठमाडौं, उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारको अपिल २ महिना पहिले
कोरोना फेला परेपछिको नेपाल ८ महिना पहिले
नेविसंघद्धारा ७३ जना बिद्यार्थीहरुलाई खाद्यान्न सामाग्री वितरण ७ महिना पहिले